Free Estonian Ntụrụndụ - Imewe Mmewe
Ntụrụndụ N'ime ihe osise a pụrụ iche, Olga Raag ji akwụkwọ akụkọ Estonia mee ihe site n'afọ mgbe mbụ e mepụtara ụgbọ ala ahụ na 1973. A na-ese foto akwụkwọ edo edo na Ọbá Akwụkwọ Mba ahụ, hichaa ya, gbanwee ya, ma dezie ya iji rụọ ọrụ ahụ. E bipụtara nsonaazụ ikpeazụ na ihe pụrụ iche ejiri na ụgbọ ala, nke na-ewe afọ 12, ọ were awa 24 itinye. Estonian n'efu bụ ụgbọ ala nke na-adọta ndị mmadụ, ndị gbara ya gburugburu nwere ezigbo ume na enweghị uche, mmetụta ụmụaka. Ọ na-agwa mmadụ niile ịchọ ịmata ihe na itinye aka na ya.
Aha oru ngo : Free Estonian, Aha ndị na-emepụta ya : Olga Raag, Aha onye ahịa : KLG Eesti AS.
Ntụrụndụ Olga Raag Free Estonian